Uyilo, ulwakhiwo, imigaqo kunye nokuphononongwa kwazo zonke iintlobo zemidlalo -Ikaro
yokuqalisa >> Imidlalo
Wonke umntu uyayithanda imidlalo. Kunye nebhodi yemidlalo yebhodi efanelekileyo. Ukuba ungumdlali wegeyimu uya kulithanda eli candelo. Ndingumntu othanda ukuzilibazisa ozama ngakumbi nangakumbi izinto.
Umbono ukwahlulahlula icandelo libe ngamacandelo aliqela. Kwelinye icala, uphononongo lwemidlalo endiyivavanyayo, kwelinye icala, ukuyilwa kwemidlalo kwaye ekugqibeleni ukwakhiwa kwayo, ikopi, ukwenziwa kwamalungu, zeziphi izixhobo zokusebenzisa, njl. Yonke into ye-DIY evela kwimidlalo.
Okwangoku apho ndinamava ngakumbi kukukhetha izinto kunye neendlela zokwakha izinto ezinokusetyenziselwa ukwandisa, ukwenza okanye ukuguqula imidlalo.
Ukongeza, kuyakubakho indawo yembali, imigaqo, ulwazi kunye nezifundo zokwakha iibhodi, iziqwenga, njl. Njl. Kwimidlalo eyahlukeneyo esijongana nayo, ukusuka kwii-Classics Chess, Backgammon, Mankala, kwiipuzzle ze-Intanethi, ukuya kwezona zangoku enye.
Icandelo elikhethekileyo le- Phrinta uze udlale ;-)
Imidlalo yemveli yemithi yeziganeko zangaphandle kunye namaqela
Sele ndidibene kabini kulo nyaka nge Imidlalo yakudala kunye nemisebenzi yokukhwela abantwana ngexesha leminyhadala yeedolophana. Yimidlalo eyenziwe ngomthi, izinto ezisisiseko kwaye ezilula kodwa bayazithanda. Abanye badlala bodwa abanye bayenze ngababini okanye njengeqela
Ndifuna ukukhwela ezinye ihlobo ukuze ndikwazi ukudlala neentombi zam kunye nabatshana bam, ndisebenzisa amahlathi esinawo omoshakeleyo ngokuba ngaphandle. Eli nqaku lidibaniso labo ndikwazi ukuthatha iifoto kunye nezo ndizikhumbulayo. Kwakukho usuku apho abantu babebaninzi kangangokuba ndandingakwazi ukuthatha iifoto. Kuyo yonke imidlalo sinokwenza uninzi lokwahluka kwimithetho nakumahluko kulwakhiwo. Amanqaku njengesikhumbuzo.
Unokuba nejimkhana elungileyo ngayo yonke le nto. Ndizahlula imidlalo ibe zii-2, ezo zezobuchule kunye nezo zisebenza ngemoto kunye nokulinganisa.
Imithetho kaJenga (indlela yokudlala iJenga)
Jenga Idlalwa ngeebhloko ezingama-54 zomthi, ubude obuphinda-phindwe kathathu ububanzi. Iibhloko zifakwe kwinqaba. Umgangatho ngamnye uneebhloko ezintathu, kwaye umgangatho ophezulu ubekwe ngokungqinelanayo. Ke ngoko ekugqibeleni kukho imigangatho eyi-3. Kodwa oku kujongeka ngcono nangomfanekiso.
Ukuba uyawuthanda umdlalo, ngokuqinisekileyo nawe uya kuthanda Suspend
Nje ukuba inqaba yakhiwe, umntu owakhe inqaba uqala umdlalo. Apha iintshukumo ziqulathe ukuthatha ibhloko kuwo nawuphi na umgangatho kwaye uwubeke kakuhle encotsheni yenqaba. .
Ityhubhu kaRubik 2 × 2 eyokwakhiwa ngabantwana
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, uDavid, utitshala wesikolo samabanga aphantsi, wandibhalela endibuza ukuba ndingabanceda na 2 × 2 uyilo lwetyhubhu yerubik yabantwana.
Bafuna ukwenza ifayile ye- Iprojekthi yemathematika yabantwana ejikeleze ityhubhu yeRubik . Ndamthumelela ngoko nangoko izinto ukuba akhe iityhubhu zerubiki kazibuthe kunye needayisi, i 2 × 2 kunye 3 × 3 kodwa iimfuno zabo zazahlukile kwaye beza nezakhiwo ezilula.
Kuya kufuneka yakhiwe ngabantwana abaneminyaka eli-10 ubudala, ke siyalibala ngezixhobo kunye neenkqubo ezinobunkunkqele neziyingozi
kwaye kufuneka ibe ngexabiso eliphantsi, ngexabiso eliphantsi kakhulu
Nangona yonke into kufuneka ithethwe, bafuna kuphela ityhubhu encinci enokulawulwa.
Isisombululo sam sesi Ityhubhu eyi-2 × 2 yeRubik yekhadibhodi kunye nephepha lemagnethi Kwaye ukuba uyenzela iklasi iya kuxabisa i-1,5 yetyhubhu nganye, ukuba ufuna ukuyenza kuphela uye kwi-3 okanye kwi-4 Euro
Iqhina lezinto ezisi-8 ezazifuna ukuba yi-1000
Kudala sayeka ukuthumela amaqhina, amaqhina, imidlalo okanye iti yengqondo ngolwe-Sihlanu. Oku kunokuba lula kuba ... Qhubeka nokufunda
Imfihlakalo yokuthabatha u-3
Kwaye ukuze ube nempelaveki emnandi ndikushiyele le ntsingiselo incinci yemathematics nangona ingekho nzima ... Qhubeka nokufunda
Uyenza njani ityhubhu yeerubiki eyi-1x2x3
Ityhubhu yeCube kaRubik ukuze ikwazi ukudlala ngecube eyi-3x2x1 Inomdla kakhulu, inomdla kakhulu, heheej.
Uyenza njani ityhubhu yerobhothi enemagnethi
Uyayithanda lento ityhubhu yerubikhi enemagnethi eyenziwe ngeedayisi?
Ewe, ukuyenza kulula ngakumbi kunokuba kubonakala ngathi ...
Sincamathisela uguqulo lwe-MIT, uxwebhu oluqwalaselwa njenge Ukutshixa iBhayibhile.
Nangona ukhetha into evakala bhetele, yi- uxwebhu olubaluleke kakhulu kwi ulwaluko kumkhandi wezitshixo. Sisifundo esitsala umdla wam. Ukuba uthetha nge-locksmith yamkelwe ngokupheleleyo, kodwa ukuba igama lokutshixa liyavela, kubonakala ngathi uza kwenza ulwaphulo-mthetho. Kodwa siza kuthetha ngale nto ngenye imini ;-)
Ngolu xwebhu uya kufunda
Umdlalo oqinisekileyo wePulse
Namhlanje ngengozi ndifumene incwadi ye-ESO Design kunye neTekhnoloji kaJames Garratt ovela kuAkal Ediciones. ... Qhubeka nokufunda